သွေးဆိပ်သင့်ခြင်း - Hello Sayarwon
သွေးဆိပ်သင့်ခြင်းဆိုတာ အချို့သော ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများ ကူးစက်ခံရခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ ရှားပါးတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်း လူ့အသက်ကို သေစေနိုင်တဲ့အထိ ဆိုးရွားပြင်းထန်တတ်ပါတယ်။ သွေးဆိပ်သင့်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ စုပ်ယူမှုအား အလွန်ကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးလစဉ်သုံး tampon များ၊ အရေပြားပေါ်ရှိ ပြတ်ရှဒဏ်ရာ၊ မီးလောင်ဒဏ်ရာများ၊ လတ်တလောတွင် ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူထားရခြင်း၊ သန္ဓေတားရန်အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းများ၊ တုတ်ကွေး၊ ရေကျောက်စတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခံရမှုများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ အကြံပြုချက်တွေအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် သွေးဆိပ်သင့်နိုင်တဲ့ အလားအလာကို လျော့ချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးလစဉ်သုံး tampon များကို မကြာခဏ လဲလှယ်ပေးပါ၊ အနည်းဆုံး ၄နာရီ မှ ၈နာရီခြားတစ်ကြိမ် လဲလှယ်ပေးပါ
ရာသီသွေးဆင်းနည်းချိန်များတွင် အသေးစား လစဉ်သုံးပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြုပါ
ယခင်က သွေးဆိပ်သင့်ဖူးသည့် ရောဂါရာဇဝင်ရှိလျှင်၊ Staphylococcus သို့မဟုတ် Streptococcus ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်မှုကြောင့် ကျန်းမာရေး ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်ခဲ့ဖူးလျှင် tampon အသုံးမပြုသင့်ပါ
Staphylococcus aureus (staph) အမည်ရှိ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ အုပ်စု အေ Streptococcus (step) ဘက်တီးရီးယားတို့က ထုတ်လုပ်တဲ့ အဆိပ်တွေက သွေးဆိပ်သင့်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ကျား၊မ၊ လူကြီး၊လူငယ်၊ အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓါကိုယ်တွင် (အထူးသဖြင့် ခြေဖဝါး၊ လက်ဖဝါးတို့တွင်) နေလောင်သကဲ့သို့ အဖုအပိမ့် အနီကွက်များထွက်ခြင်း
မျက်လုံး၊ ခံတွင်းနှင့် လည်ချောင်းအတွင်း နီရဲခြင်း
လတ်တလောမှာ tampon အသုံးပြုနေသူတွေ၊ ထိခိုက်ရှနာတစ်ခုခု ရှိထားသူတွေအနေနဲ့ အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့လက္ခဏာများ ဖြစ်လာခဲ့ရင် ဆေးရုံဆေးခန်းရှိရာသို့ အမြန်ဆုံး သွားရောက်ကုသမှု ခံယူသင့်ပါတယ်။
သွေးဆိပ်သင့်ခြင်း ဟုတ်မဟုတ် ရောဂါရှာဖွေအတည်ပြုဖို့ သွေးနဲ့ဆီးနမူနာယူပြီး staph သို့မဟုတ် strep ဘက်တီးရီးယားပိုးရှိမရှိ စစ်ဆေးစမ်းသပ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်၊ မိန်းမကိုယ်၊ သားအိမ်ခေါင်းနဲ့ လည်ချောင်းတို့မှ အချွဲမြေးနမူနာယူပြီးတော့လည်း ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
သွေးဆိပ်သင့်ခြင်းကြောင့် အခြားကိုယ်အင်္ဂါများ ထိခိုက်ခြင်းရှိမရှိ သိနိုင်ဖို့ CT scan ဖတ်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း၊ ခါးဆစ်ရိုးခြင်ဆီဖောက်၍ စစ်ဆေးခြင်း စတဲ့ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရဖို့ အလားအလာရှိပါတယ်။
အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ သွေးဆိပ်သင့်ခြင်း ဖြစ်လာခဲ့ရင် မဖြစ်မနေ ဆေးရုံတက်ပြီး လိုအပ်တဲ့ကုသမှု ခံယူဖို့ပါပဲ။
ဆေးရုံတက်တဲ့အခါ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ကျဆရာဝန်များက
ခန္ဓါကိုယ်မှာ ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးခြင်းအတွက် အရည်များ အသုံးပြု ကုသပေးမှာဖြစ်ပြီး
အခြားရောဂါလက္ခဏာများ သက်သာပျောက်ကင်းစေဖို့ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုးဝင်ထားတဲ့နေရာက တစ်ရှူးအသေတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ ပြည်နဲ့အခြားအရည်တွေ ခန္ဓါကိုယ်ပြင်ပဆီ ထွက်လာစေဖို့ ခွဲစိတ်ကုသမှု ပြုလုပ်ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးလည်း ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
Porter, R. S., Kaplan, J. L., Homeier, B. P., & Albert, R. K. (2009). The Merck manual home health handbook. Whitehouse Station, NJ, Merck Research Laboratories. Print edition. Page 11.